Disc Herniation & Back Spine Lumbar Support Belt - Free Shipping & No Tax | အတွက် WoopShop®
Disc Herniation & Back Spine Lumbar Support Belt အတွက်
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ စပိန် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရုရှားပြည်ထောင်စု
အရောင် A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု ၂ B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု A3ပံ့ပိုးမှု - အနက်ရောင်
တရုတ် / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / S SPAIN / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / S အမေရိကန် / A3ပံ့ပိုးမှု - Grey / S တရုတ် / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / M ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / S SPAIN / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / M United States / C5Support - Grey / M တရုတ် / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / L ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / M SPAIN / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / L United States / C5Support - Grey / L တရုတ် / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / XL ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / L SPAIN / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / XL United States / C5Support - Grey / XL ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / XL China/B Simple3Support 2/M ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / B ရိုးရှင်းသော ၃ ပံ့ပိုးမှု ၂ / S SPAIN / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု2/ M United States / B Simple3ပံ့ပိုးမှု2/ M China/B Simple3Support 2/L ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / B ရိုးရှင်းသော ၃ ပံ့ပိုးမှု ၂ / M SPAIN / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု2/ L United States / B Simple3ပံ့ပိုးမှု2/ L China/B Simple3Support 2/XL ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / B ရိုးရှင်းသော ၃ ပံ့ပိုးမှု ၂ / L SPAIN / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု2/ XL United States / B Simple3ပံ့ပိုးမှု2/ XL တရုတ် / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / S ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / B ရိုးရှင်းသော ၃ ပံ့ပိုးမှု ၂ / XL SPAIN / C5ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / S United States / C5Support - Grey / S တရုတ် / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု / M ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု / S SPAIN / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု / M United States / B Simple3ပံ့ပိုးမှု / M တရုတ် / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု / L ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / B Simple3Support / M SPAIN / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု / L United States/B Simple3Support/L တရုတ် / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု / XL ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / B Simple3Support / L SPAIN / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု / XL United States / B Simple3Support / XL China/B Simple3ပံ့ပိုးမှု 2/S ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / B Simple3Support / XL SPAIN / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု2/ S United States / B Simple3ပံ့ပိုးမှု2/ S တရုတ် / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / M ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / S SPAIN / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / M United States / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / M တရုတ် / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / L ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / M SPAIN / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / L အမေရိကန် / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / L တရုတ် / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / XL ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / L SPAIN / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / XL United States / A3ပံ့ပိုးမှု - အနက်ရောင် / XL China/B Simple3Support/S ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / XL SPAIN / B ရိုးရှင်းသော3ပံ့ပိုးမှု / S United States/B Simple3Support/S တရုတ် / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / M ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / S SPAIN / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / M အမေရိကန် / A3ပံ့ပိုးမှု - Grey / M တရုတ် / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / L ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / M SPAIN / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / L အမေရိကန် / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / L တရုတ် / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / XL ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / L SPAIN / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / XL United States / A3Support - Grey / XL တရုတ် / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / S ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / A3ပံ့ပိုးမှု - မီးခိုးရောင် / XL SPAIN / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / S အမေရိကန် / A3ပံ့ပိုးမှု - Black / S
Disc Herniation & Back Spine Lumbar Support Belt - China / A3Support - Grey / S အတွက် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးသက်ရောက်မှု - အရိုးစောင့်ရှောက်မှု
ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Brace & Support များ
အင်္ဂါရပ်များ: Lumbar Support Belt၊ ကျောအောက်ပိုင်းပံ့ပိုးမှု၊ အတွင်းမှသံမဏိပါ ၀ င်သော Back ခါးပတ်၊ Self-အပူ pads နှင့် Back Brace Support
အမျိုးအစား A: 3-plate Lumbar Support
S: အရှည် ၉၀ စင်တီမီတာ၊ ခါးလုံးပတ် ၆၅-၇၅ စင်တီမီတာအတွက်သင့်တော်သည်
M: အရှည် ၁၀၀ စင်တီမီတာခန့်၊ ခါးလုံးပတ် ၇၆-၉၀ စင်တီမီတာအတွက်သင့်တော်သည်
L: အရှည် ၁၁၀ စင်တီမီတာခန့်၊ ခါးလုံးပတ် ၉၁-၁၀၀ စင်တီမီတာအတွက်သင့်တော်သည်
XL: အရှည် ၁၂၀ စင်တီမီတာခန့်၊ ခါးလုံးပတ် ၁၀၁-၁၁၀ စင်တီမီတာအတွက်သင့်တော်သည်
Type B: ရိုးရှင်းသော 3-plate Lumbar Back Support
Type C: 5-plate Lumbar Brace
အရွယ်အစား / အကျယ် / အရှည် / ခါးလုံးပတ်
екрасныйподдерживающийпояс။ мамоготакой။ Здесьжеибрал။ Берувторой, наподарок, таксказать။
အလို! မြန်ဆန်ပေးပို့။ ထုတ်ကုန်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဈေးဆစ်ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်နှစ်တာလုံးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့အထောက်အပံ့ခါးပတ်ရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါကအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။ XL ရပြီ၊ ငါ့ ၄၅ လက်မ "
ဖောက်သည် 4.9 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 128495 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။